About Us - I-Hebei Hongqiqu New Material Co, Ltd.
I-Hongqiqu New Material Co, Ltd iyinhlangano yokukhiqiza yangasese neyokuhweba, sakha futhi sithengisa ama-elektroni ama-graphite ebanga kusuka kububanzi obungamamitha ayi-150mm ukuya kububanzi obungu-700mm ku-RP / HP / ebangeni le-HP, izinto zokuphikisa ezinjengezitini zokuphikisa, ezinye izinto zokuhlobisa ezingafanele, I-CPC / i-GPS yenal coke / coke petoke, neminye imikhiqizo ehlobene nensimbi.
Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi ekushiseni okuphezulu kwezinto zokugcina zezimboni ezimbonini zezinsimbi, okokwakha, ezokuphethiloli nokunye. Sihlinzeka ikakhulukazi imikhiqizo yamabhizinisi amakhulu aseChina namaphrojekthi wokwakha abalulekile, njengeBaoSteel, Aluminium Corporation yeChina. Ngasikhathi sinye futhi imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni angaphezu kwezi-20 nezifunda.
Sine amasethi amabili womugqa ophelele wokukhiqiza usuka ekubalweni uye kumshini. Izisetshenziswa eziphambili zifaka amathani angama-3 500 wemishini yokufakelwa enezingqimba, imishini yokulungisa umugqa wangaphakathi, igumbi elinamakamelo amane, amafasitela wangaphakathi we-200000KVA, kanye namathangi wokufaka ngaphakathi. Amathini angama-24 we-calciner, umzimba ozenzakalelayo we-CNC ngokuphelele, umugqa wokukhiqizwa ohlangene wokukhiqizwa kanye nemishini yokuqothula uthuli ethuthukisiwe kanye nemishini yokuchithwa kwensimbi.